September 2012 – Sunuwar.org
श्री सम्पूर्ण साधारण सदस्य ज्यूहरु
सुनुवार सेवा समाज, जिल्ला तदर्थ समिति,
उपरोक्त सम्बन्धमा संस्थाको विधान बमोजिम काठमाडौं जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका सुनुवारहरुलाई स्थानीय तौरमा ऐक्यवद्ध गरी सुनुवार सेवा समाजको उद्देश्यानुसार कोइँच (सुनुवार) भाषा, संस्कृतिको संरक्षण संवद्र्धन तथा विकास गर्दै आदिवासी जनजातिको हकाधिकार प्राप्तिको लागि सशक्तरुपमा लाग्न सुनुवार सेवा समाज प्रथम काठमाडौं जिल्ला सम्मेलन यही असोज १३ गते सुनुवार सेवा समाजको भवन, कोटेश्वर काठमाडौंमा गरिने भएको हुँदा उपस्थितिको लागि काठमाडौं जिल्ला तदर्थ समिति हार्दिक अनुरोध गर्दछ । निर्णय गर्नु पर्ने विस्तृत प्रस्तावहरु, प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदनहरु तपाईँको ठेगानामा पत्रचार गर्नुका साथै एसएमएसमा जानकारी र इ–मेलमा फाइल एटेच गरी पठाइएको समेत समितिले जानकारी गराउँदछ ।
जिल्ला तदर्थ समिति, काठमाडौ
सुनुवार सेवा समाजलाई हालसम्म प्राप्त सहयोग
भदौ २८ । सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय समितिलाई २०६८ सालदेखि हालसम्म रु. १०८००० (रु. एक लाख आठ हजार) सहयोग प्राप्त भएको छ । कटारी, उदयपुरका दलबहादुर सुनुवार हाल नयाँ बानेश्वर, जिआरयू ब्रुनाईमा कार्यरत, ले सभाहलको कुर्सी किन्न रु. ५०,००० (पचास हजार) सहयोग गर्नु भएको थियो भने अपुग रकम रगनी, ओखलढुंगाका डबिन सुनुवार, हाल अमेरिकन एम्वेसीमा कार्यरत, ले रु. १०,००० (रु. दश हजार), र गुप्तेश्वर, रामेछापका पोष्टबहादुर सुनुवार हाल अमेरिकन एम्वेसीमा कार्यरत, ले रु. १०,००० (दश हजार) सहयोग उपलब्ध गराउँनु भएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको प्रमुख समस्या भनेको लोडसेडिङ हो । यसको निराकरणको लागि प्रेमकुमार सुनुवार (क्याबनाइलु), गुप्तेश्वर १, रामेछापका हाल व्रिटिश आर्मी युकेमा कार्यरत, ले संस्थामा इन्भर्टर किन्न रु. ३०,००० (तीस हजार) सहयोग गर्नु भएको थियो भने गोपालबहादुर सुनुवार भूजि २ रामेछाप हाल न्यु साकुरा अप्टिकल, ज्ञानेश्वरमा व्यवसाय गरीरहेको, ले रु. ६,००० (छ हजार) को सभाको लागि सिलिङ फ्यान सहयोग गर्नु भएको थियो । थप सिलिङ फ्यान राख्न श्याम सुनुवार (रिल्मा याअता), प्रिती ८ हाल तल्छीखेल ज्ञानचोकमा सविसिवानी सेकुवा कर्नर तथा धराने कालो बङ्गुर र कुखुराको मासु पसल व्यवासय सञ्चालन गर्दै आएका, ले रु. २००० (दुई हजार) सहयोग गर्नु भएको छ ।
यी नगद सहयोग गर्ने कोइँचको आलवा विभिन्न क्षेत्रबाट सरसहयोग गर्ने सम्पूर्ण कोइँच (सुनुवार) लाई हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्दै सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले सम्पूर्ण पहिचानप्रेमी कोइँच एक ठाउँमा उभिन हार्दिक आब्हान पनि गर्नु भयो ।
यस वर्ष देखि आम कोइँच (सुनुवार) ले सुनुवार सेवा समाज लगायत आम कोइँच (सुनुवार) को चाडपर्व कहिले, कुन, कुन चाड पर्छ र धर्म, कला संस्कृति संरक्षणको लागि कस्को भूमिका के हुने ? र कोइँचको थर के कति छन् भन्ने कुराको दस्तावेजीकरण गरिएको हुँदा आम कोइँच (सुनुवार) लाभन्वित हुने पनि बताउनु भयो ।
Posted by: admin | on September 9, 2012
पहिरोका कारण कोइँच विस्थापित : चुपचाप सरकारी निकाय
भदौ २४ । कोइँचको शुशुच थरीहरुको मुल वस्ती ओखलढुंगा पात्ले गा.वि.स. वडा नंं ८ को जेसेमा पहिरोको कारण आठ घर सुनुवार विस्थापित भएका छन् । भदौ ८ गते पहिरो गए पनि सरकारी निकायले कुनै उद्धार कार्य गरेको छैन । सुनुवार सेवा समाज पात्ले गाउँ समितिका अध्यक्ष लालबहादुर सुनुवारले जिल्ला प्रशासनले राहत दिन तथा उद्धारको लागि चाहिने भएकोले तस्वीर खिच्ने क्यामरा समेत नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्लामा राजनीतिक दलमा यज्ञराज सुनुवार तथा प्रदिप सुनुवार भए पनि सुनुवारले कुनै राहत पाएका छैनन् ।
Posted by: admin | on September 8, 2012
क्युइँतबु कल्याण कोषको सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।
भदौ २३ । कोइँच (सुनुवार) को विभिन्न थरीहरु मध्ये क्युइँतिचको प्रतिनिधिमूलक संस्था क्युइँतबु कल्याण कोषको सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सो सभामा गंगाबहादुर सुनुवार, मनोरमा सुनुवार, टिकाराम मुलिचले शुभकामना दिनु भएको थियो । संस्थाको प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको सो सभामा प्रमुख अतिथि सुनुवार सेवा समाजको अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले सबै कोइँचहरु एक भई कोइँच पहिचानको लागि लड्नु पर्र्ने बताउनु भयो ।
कोइँच परम्परागत विधिबाट उद्घाटन भएको सो कार्याक्रममा क्युइँतबु कल्याण कोषको नियमित प्रकाशन जत्नमुइँलि पनि सार्वजानिक गरिएको थियो । साथै सिन्धुली अमलेकी ८७ प्रतिशत अंक ल्याई कोइँच विद्यार्थीमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी प्रिया क्याःब सुनुवारलाई प्रमाण पत्र सहित नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
Posted by: admin | on September 3, 2012
क्युइँतबु कल्याण कोषको वार्षिक साधारण सभा
१७ भदौ । लगभग छ दर्जन विभिन्न कोइँचहरुमा क्युइँतिच थरीको सामाजिक तथा राजनीतिक संस्था क्युइँतबु कल्याण कोषको वार्षिक साधारण सभा यही भदौं २३ गते शनिवार सुनुवार सेवा समाजको भवन कोटेश्वरमा हुँदै छ । सो सभामा क्युइँतिचहरुले वर्षभरि गरेको विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजानिक गर्ने छन् । उनीहरुको नियामित प्रकाशन जातनामुइलि वर्ष ७, अंक ७ पनि सोही दिन सार्वजानिक गर्ने भएका छन् । विश्वभरि छरिएर रहेको क्युइँतिचहरुको आस्थाको केन्द्र क्युइँतबु कल्याण कोषले विभिन्न शुभ, अशुभ कार्यमा साथसहयोग गर्ने तथा पहिचानको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम मात्र होइन छिमेकी अन्य थरीहरुको इतिहासको खोजविन पनि गर्दै आएको छ । यस पटक मुलिच थरीहरु कसरी भए भन्ने वारे टिकाराम मुलिचको अनुसन्धानलाई जातनामुइलि मार्पmत सार्वजानिक गर्दै छन् ।
हुन त अन्य थरी ज्याँतिच, जेस्पुच कोइँचहरुको पनि संस्था खुलेको छ । जिजिचहरु पनि संगठित हुने हल्लासम्म चलेको हो । तर क्युइँतिचहरु जस्ता सक्रिय र सिर्जनात्मक काम भने गर्न सकेका छैनन् । क्युइँतबु कल्याण कोषले आप्mना विधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ कि सुनुवार सेवा समाजलाई पहिचानको लागि साथसहयोग गर्ने छ । यस्तै अन्य थरीका कोइँचहरु पनि सक्रिय हुन क्युइँतिचहरुलाई उदाहरण मान्ने कि ।
Posted by: admin | on September 1, 2012
रिचमोण्ड नेपाली मेलामा किराँत सुनुवार सेवा समाज यूकेको सहभागिता ।
तमु धि एशोसियसन यूकेको आयोजनामा रिचमोण्ड एथलेटिक्स ग्राउण्ड, लण्डनमा २६ अगस्त २०१२को दिन हजारौ नेपालीहरुको सहभागितामा नेपाली मेला सम्पन्न भएको थियो । उक्त मेलामा किराँत सुनुवार सेवा समाज यूकेले आफनो भेष भूसामा ढोल, झ्याम्टा बजाउदै श्याँदर शिली प्रस्तुत गनेुका साथै कोइँच महिलाहरुले मार्चपास गरेका थिए । कार्यक्रममा जेनी सुनुवार र अभिशेक सुनुवारले नाच प्रतियोगीतामा भाग लिएका थिए । कार्यक्रमका झलकहरु यहाँ समावेश गरिएका छन् । click here to see photos